ESI TINYE UBUNTU NA IGWE AKUKU VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
ỌtụtụCam bụ mmemme na-akpali mmasị nke na-enye gị ohere ịgbasa ikike nke kamera weebụ site na iji ya na ngwa dị iche iche dịka Skype, ICQ, MSN, CamFrog, PalTalk, Yahoo, na-agbakwunye ụdị pụrụ iche pụrụ iche na foto. Nke ahụ bụ, ị na-eweta mmetụta dị na onyinyo nke a ga-ahụ ọ bụghị naanị site n'aka gị, kamakwa site na onye na-ahụ gị.
Nke a bụ ngwa bara uru ma dị ala nke na-emeghe ohere nke iji igwefoto weebụ n'otu oge na ọtụtụ ndị jikọtara-ndị ahịa. Ihe bara uru ga-aba uru karịsịa nye ndị na-eji ihe omume dị iche iche na-emekọ ihe ọnụ maka nkata n'ịntanetị na njikọ kamera.
Mgbasa ozi site na ọtụtụ ọwa
Na ManyCam ị nwere ike jikọọ igwefoto dị iche iche, nakwa mee ka ngosi nke desktọọpụ. Ị nwere ike ịgbanwe mgbe niile site n'otu igwefoto gaa na onye ọzọ ma ọ bụ gbanwee ngosipụta nke mgbasa ozi site na ọtụtụ isi mmalite na ihuenyo n'otu oge ahụ.
Na ọtụtụCam ị ga-ahụ ọtụtụ mmetụta dị iche iche. Ịnwere ike iji aka gị gbanwee agba, nchapụta, iche, ma họrọ site na ndetetị dị njikere. Ịnwere ike ịhọrọ ịgbanye foto na foto ahụ site na igwefoto na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike ikpuchi ederede na onyinyo ahụ. Ị nwere ike ime ya ka ọ bụrụ akara, ma ọ bụ ị nwere ike dị n'ụdị nke na-agba ọsọ. Enwere ike ịhọrọ ụcha nke ederede na ndabere, yana dozie nghọta.
ỌtụtụCam na-enye ndị ọrụ ohere ịbịaru na foto ahụ site na igwefoto. Ị nwere ike ịcha onwe gị maọbụ ndabere dị ka ịchọrọ ma dị ka ihe efu na-enye ohere.
Mgbe nkwarịta ụka, ị nwekwara ike igosipụta ụbọchị na oge, ma ị nwekwara ike ịtọ oge ị ga - ahụ na onye na - elekọta gị. Ọ dị nnọọ mfe ma ga - enyere gị aka ịdebe oge.
I nwekwara ike ibudata listi egwu gị gaa n'usoro ihe omume ma gee egwu kacha mma gi na enyi gi. Ikwenye, nkwurịta okwu na egwu dị mma bụ ihe na-adọrọ mmasị.
1. Ike ịrụ ọrụ na ndị ozi kachasị ngwa ngwa;
2. Otu nnukwu ihe na-emetụ n'ahụ;
3. interface interface dị mfe;
4. Ike ịdekọ vidiyo;
5. Free mbipute;
6. Russian version.
1. Ụdị nnwere onwe nwere ụfọdụ ike;
2. Nchigharị na-anaghị arụ ọrụ mgbe niile.
ỌtụtụCam bụ ngwaahịa software dị elu maka echichi na kọmputa desktọọpụ maka ịhazi nkwukọrịta vidiyo. A na-ekesa ọrụ ahụ na usoro nke ikikere n'efu ma ga-enwe mmasị na ndị ọrụ, n'ihi ọnọdụ ụfọdụ, ga-ahazi nkwurịta okwu n'ịntanetị, gụnyere nkwurịta okwu na nkwurịta okwu, na itinye aka nke ndị ozi dị iche iche ozugbo.
Download ManyCam maka n'efu
WebcamXP SMRecorder Onye na-egwu foto Morphvox obere
ỌtụtụCam bụ mmemme nke na-enye gị ohere ịgbasawanye ike ọrụ nke kamera weebụ ma gbakwunye mmetụta dị iche iche na ihe ịchọ mma na oyiyi ahụ. Na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa na-ekwurịta okwu site n'Ịntanet.
Onye Mmepụta: ManyCam